Thola imali eyengeziwe: imibono yokuthola okwengeziwe ekupheleni kwenyanga | Ezezimali Zomnotho
Thola imali eyengeziwe
Namuhla abanenhlanhla kakhulu banemiholo okuthi, ekupheleni kwenyanga, ifinyelele kuma-akhawunti abo abangathenga ngawo ukudla futhi benze impilo eyanele noma engaphansi. Kodwa-ke, ukuthola imali ethe xaxa akukaze kulimaze, futhi abaningi banquma ukudela esinye isikhathi sabo samahhala ukuze bakhethe impilo engcono, kungaba ngokuthola okuningi ekupheleni kwenyanga, noma ngokufuna imisebenzi eminingana ebalethela okuningi " elinamanzi "iholo.
Nokho, Ungayithola kanjani imali eyengeziwe? Ngabe kungenziwa "ngokusemthethweni"? Namuhla sizokunikeza imibono yokunye okungeziwe ekupheleni kwenyanga okungaze kulimaze muntu.
1 Ungayithola kanjani imali eyengeziwe
1.1 Umsebenzi wesibili
1.2 Zenzele izifundo zakho uzithengise
1.3 Dala isitolo sakho online
1.4 Thola imali eyengeziwe: Bhala izincwadi
1.5 Thengisa izithombe
1.6 Thola imali eyengeziwe: umqeqeshi womuntu (noma uthisha)
Ungayithola kanjani imali eyengeziwe
Kuhlale kuthiwa imali ayilethi injabulo. Kepha iqiniso ukuthi, noma enganikeli ngalo, ngoba akakuganga ebusuku noma asho izinto ezinhle kuwe, ngaphezu kokungabi nemizwa; iqiniso ukuthi lisiza kakhulu. Futhi ngukuthi namuhla umphakathi ubuswa yimali. Uma unayo ungakhona zinike imicabango oyifunayo, noma okungenani uphile ngendlela ekhululekile futhi ezolile, noma ngabe uyayisindisa; Uma ungenayo, kufanele ujike ukuze uziphilise.
Ngakho-ke, ukuthola imali eyengeziwe yinto abaningi ababhalisela yona, ikakhulukazi uma kungadingeki uyisebenzele kanzima. Kepha, yiziphi izinketho onazo zokukufeza? Lapha sikhuluma ngezinye zazo.
Cabanga ukuthi unomsebenzi womunye umuntu. Usebenza uhlelo olufanele futhi unamahora ambalwa wamahhala owanikela kuwe. Kepha, Kuthiwani uma singakutshela ukuthi ungafuna umsebenzi wesibili? Abaningi bacabanga ukuthi lokhu kusho ukuba nezinhlelo ezimbili, kepha akudingeki kube njalo.
Ngokuqondile, sikhuluma ngomsebenzi wokuzimela. Futhi yilokho Noma usebenzela omunye umuntu, ungabhalisa njengomuntu ozisebenzayo. Vele, awunakuba umsebenzi ozimele ngokugcwele, kodwa ube itoho. Kepha lokho kunenzuzo eyengeziwe: awuyikhokhi yonke imali abayifunayo.
Isibonelo, uma usebenza ehhovisi lezokuphatha ekuseni, kungani unganikeli ngezinsizakalo zakho njengomphathi ntambama? Noma unomunye umsebenzi ohlobene nento oyithandayo? Yebo, kungenzeka ukukwenza, futhi yize lokho kuzothatha amahora okuphumula nokunqanyulwa, iqhinga ukukhetha umsebenzi okujabulisa wena futhi ongakhathali. Ngakho-ke ukuthola imali eyengeziwe kuzoba mnandi kakhulu futhi kuzuzise.
Zenzele izifundo zakho uzithengise
Uma uyakwazi ukubhala noma ukuqopha amavidiyo, kungani ungawenzi imali? Inhloso ukuthi dala ikhasi lapho uthengisa khona izifundo zakho. Isibonelo, okuthile okuhlobene nomsebenzi wakho. Okokufundisa, noma izihloko ezihlobene eduze nokumaketha kwedijithali kungukuhleleka kosuku. Kepha nalabo abayingxenye yosuku nosuku.
Isibonelo, kuthiwani ngokusiza abantu ukulungisa umshini wokuwasha? Uma ukwazi kahle, kunesiqiniseko sokuthi kunamaqhinga amaningi owaziyo futhi abantu bazovuma ukuwafunda (futhi ngalokho bazuze ngokwezezimali).
Ukwenza lokhu, okuhle kakhulu ukuthi wenza amavidiyo asezingeni eliphezulu kanye nama-ajenda afanelekile ozothola okungeziwe ekupheleni kwenyanga.
Dala isitolo sakho online
Abasebenzi abaningi banqume ukuthi, ngaphezu komsebenzi wabo, bafuna ukuqala ibhizinisi. Futhi ngakho Bakha isitolo esiku-inthanethi eshibhile impela, ikakhulukazi uma unolwazi ngaso futhi niyakwazi ukugqoka. Futhi yini ongayithengisa? Yebo, kukhona ukuhlukahluka okukhulu lapha, ngoba ungacabanga ngokuthengisa cishe yonke into. Noma ngabe uyakwazi okuthile, njengokwenza insipho eyenziwe ekhaya, ama-brooches, ubucwebe ... ungakhuthaza ukuthengiswa kwezingcezu ezikhethekile nezenziwe ngezandla (manje esezisemfashinini kakhulu).
Ngaphezu kwalokho, ngeke kukuthathe isikhathi eside futhi uzothola okungeziwe.
Thola imali eyengeziwe: Bhala izincwadi
Yebo, siyazi ukuthi namuhla ababaningi abafundi. Futhi nokuthi kufanele ucabangele ubugebengu, obonakalisa imali engenayo yabalobi nayo yonke imizamo abayenzile. Futhi ngukuthi, yize umbhali engathatha phakathi kwenyanga eyodwa nonyaka owodwa ukubhala inoveli, enikela ngamahora nsuku zonke, lokho akutholayo ngencwadi ngayinye kubi, yingakho badinga ukuthengisa kakhulu (futhi ubugebengu abukho ukusiza ukuthola kabusha utshalomali olwenziwe).
Nokho, Kuyindlela yokuthola imali ethe xaxa ngaphandle kokutshala imali. Konke okudingeka ukwenze ukubhala inoveli bese kuthi, uma ungafuni ukusebenzisa noma yini, yilayishe ku-Amazon noma kwenye ipulatifomu yokushicilela incwadi yamahhala ukuqala ukuthengisa. Vele, uzodinga ukuyihambisa kancane ukuze abantu bakwazi futhi bakunike ithuba. Kepha uma uphumelela, abamemezeli bangakubona.
Uma ungumuntu unentshisekelo ngezithombe futhi uthanda ukukhipha ikhamera yakho bese ubamba izimo, imizwa ... uyazi ukuthi ungathengisa izithombe zakho nge-Intanethi? Njengamanje le nsizakalo ifunwa kakhulu, hhayi eSpain kuphela, kodwa emhlabeni wonke. Futhi ngukuthi ukubonisa okuqukethwe kwedijithali, izithombe zibalulekile.
Ngakho-ke ungakha iphothifoliyo yezithombe bese uzilayisha kuzingxenyekazi lapho izithombe zibhalwe khona. Ngayinye naleyo abayithenga kuwe, bazokunika imali. Vele, ekuqaleni kuzoba kuncane, kepha uma ugcina ikhwalithi enhle, ngubani owaziyo? Mhlawumbe uqala ukuthengisa kakhulu noma nemikhiqizo ikuqaphele ukuze ube nguchwepheshe enkampanini yabo.
Thola imali eyengeziwe: umqeqeshi womuntu (noma uthisha)
Uma ungumpetha kwezemidlalo, noma kwesinye isifundo, uyazi ukuthi othisha abakwi-inthanethi bayanda? Kuyindlela yokufundisa ngobuchwepheshe obusha, lapho abantu abaningi ngokwengeziwe bekhuthazwa. Uma usazi isiNgisi, uma unezinkuni njengomqeqeshi womuntu siqu, noma uma kunesihloko osazi kahle, kungani ungazuzi?
Ngabe ungadala i- «Online Academy» lapho unikeza khona amakilasi abonakalayo, kungaba kumuntu oyedwa noma eqenjini elincane, ukubasiza ngomsebenzi wesikole, ukulungiselela izivivinyo, noma ukufundisa isihloko esiphikisana nabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ukuphela kwenyanga » Thola imali eyengeziwe